Google weputara Google Tag Manager | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị rụtụla ọrụ na saịtị ndị ahịa wee tinye koodu ntụgharị site na Adwords gaa na ndebiri mana ọ bụ naanị mgbe egosiputara template ahụ na njirisi ụfọdụ, ị maara isi ọwụwa nke ịkpado peeji!
Mkpado bụ obere ọnụọgụ koodu weebụ nke nwere ike inye aka nye nghọta bara uru, mana ha nwekwara ike ibute nsogbu. Ọtụtụ mkpado nwere ike ime ka saịtị dị nwayọ ma zoo; na-ezighị ezi etinyere na mkpado nwere ike ịgwagbu gị n'ihe; ma ọ nwere ike iri oge maka ngalaba IT ma ọ bụ ndị ọrụ webmaster iji tinye mkpado ọhụrụ-na-eduga na oge furu efu, data furu efu, na mgbanwe ndị furu efu.
Taa, Google mara ọkwa Nkume Google Tag. Nke a bụ ngwa ọrụ ga - eme ka ihu akwụkwọ maka mmadụ niile dị mfe!
Nchịkọta Ihe Nlekọta Google Tag dị ka edepụtara na saịtị ha:
Ahịa ahịa - can nwere ike ịmalite mkpado ọhụrụ site na ịpị aka ole na ole. Nke a pụtara ịmegharị mmemme na mmemme ndị ọzọ data na - emecha dị n’aka gị; enweghị izu ichere (ma ọ bụ ọnwa) maka mmelite koodu weebụ - ma na-efu ahịa ahịa na ahịa bara uru na usoro ahụ.
Dabere data - Google Tag Manager nke dị mfe iji njehie ịlele na ngwa ngwa mkpado loading pụtara na ị ga-mgbe niile mara na mkpado ọ bụla na-arụ ọrụ. Inwe ike ịnakọta data a pụrụ ịdabere na ya na weebụsaịtị gị niile na ngalaba gị niile pụtara mkpebi ndị ọzọ nwere nghọta na igbu ọchụ kacha mma.
Ọsọ ma dịkwa mfe - Google Tag Manager dị ngwa, kensinammuo, ma hazie ka ndị ahịa tinye ma ọ bụ gbanwee mkpado mgbe ọ bụla ha chọrọ, ma na-enyekwa ndị ọrụ IT na webmaster obi ike na saịtị ahụ na-agba ọsọ nke ọma-na na-ebu ngwa ngwa-ka ndị ọrụ gị ghara ịhapụ ịhapụ nghọta .
Tags: njikwa faili googlegoogle +mkpadonjikwa njikwaịkpadotags
Ọkt 3, 2012 na 3:30 AM
Anwalebeghị m nke a, ma m nụrụ ya n'ọnụ gị. Daalụ maka ịkọwapụta nke a, ịkọ mkpado na-eme ka ọ dị mfe na ibe ọ bụla. Ha na-amalite nkwụnye na WordPress maka mkpado?
Ọkt 3, 2012 na 5:03 PM
Ahụbeghị m nke a, @disqus_FHwBYQKmUU: disqus mana ọ gaghị ewe oge iji zụlite otu!